Lixa Oromiyaatti baankonni saamamuu, waajjiraaleen gubachaa jiru jedhan aanga'oonni mootummaa - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, DESALEGN TEREFE
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti waajjirri bulchiinsaa aanaa kan waajjiraalee torba of keessaa qabu gubachuu Itti-Gaafatamaan Waajjira Komunikeeshinii Godinaa Obbo Dassaaleny Tarrafaa himan.
''Qaamni hidhate kun mana jireenyaa manaajera baankicha dhaquun erga qabanii fidanii baankicha bansiisan."
Erga banamee booda furtuun kaazinaa birriin keessa taa'u kaasherii harka waan taheef banuuf yaalanis waan dadhabaniif waan alarratti argatan fudhatanii manaajericha fudhatanii deeman,'' jechuun BBCtti himan.
Qaamni hidhate jedhamu kun isa kami gaaffii jedhuuf, ''nuyi qaama kana hin jenne, garuu qaamni naannicha hidhatee socho'u kan uummannis beeku jira, akka dhageenyetti isaanumadha jedhan,'' jedhu Obbo Dassaaleny.
Humni waraanaa mootummaa naannicha osoo jiruu akkamiin kun raawwachuu danda'e? kan jedhuuf Obbo Dassaaleny humni waraanaa kan jiru magaala Shaambuu fi aanaa Jaardagaa Jaarteedha malee bakkicha hin turree jedhan.
Lixa Oromiyaatti Baankiin Daldala Itoophiyaa shan saamamuun hojjettootni baankichaa afur ammoo ugguramuu bakka bu'aan Manaajeraa Distiriiktii Lixaa obbo Girmaa Ciibsaa BBCtti himan.
Sanbata darbe ganama keessaa naannoo sa'a shaniitti qaama hidhatee jiruufi eenyummaan isaa hin beekamneen damee baankii Daldala Itoophiyaa kudhan irra miidhaa gaheera jedhan Obbo Girmaan.
Saamichi kun gaggeefame galgala keessa sa'a 10 irraa eegaluun hanga halkan sa'a saddetitti gaggeefamuu himanii hundinuu sa'aatii wal fakkaataa irra raawwate jedhan.
Akkamiin to'achuun dadhabame kan jedhuuf gareedhaan socho'aa turan qaama hidhate tahuu qofa beekna jedhan.
Dabalataan namootni garaagaraa ugguramanii fudhatamuun kaan miidhaan isaan irra gahee deebi'anii yaalii dabalataaf kan ergaman jiru jedhanii kan hafanis jiru jedhan.
Daareektara Qorannoo Gabaa fi Komiikeeshinii Bizinasaa baankichaa kan ta'an Obbo Ballaxaa Waqbeekaa baankiin isaaniis warra saamaman keessaa ta'uu mirkaneessanii ''dameelee isaan kam irratti saamichi akka gaggeefame garuu hin adda hin bane'' jedhan.
Hojjettootni baankichaa qaamolee hidhatanii saamicha gaggeessan Kanaan butamanii akka turan Obbo Ballaxaan himanii hojjetootni kun hangam akka ta'aniifi amallee harka hidhattoota kanaa kan jiran ta'uu fi dhiisuu qulqulleeffachaa akka jiraniis nutti himaniiru.
Saamicha tureen miidhaa hangamiitu baankicharra akka gahe waliigalatti himuun rakkisaa akka ta'e obbo Ballaxaan dubbataniiru.
ABO'n maal jedhe...
Obbo Mikaa'el Booran miseensi Gumii Shanee ABO waraanni keenya waggoota dheeraaf uummata isaa garbummaa jalaa baasuuf qabsaa'aa ture tasuma gochaa akkasii hin raawatu jedhan.
Obbo Mikaa'el ''mootummaan humna guddaa gara Godinaalee Wallaggaatti bobbaasun uummata akka komaandi postiitti bulchaa jira waan taheef, achitti asitti maaltu tahe kan jedhu ammoo guutuutti argachuuf nu rakkiseera'' jedhan.
Garuu xiyyaarri waraanaa baay'inaan deddebi'aa waan ooluuf sodaa guddaan jira jedhan.
Gama biraan Obbo Mikaa'el Booranis mootummaan xiyyaara fayyadamuun aanaa Begii fi Gidaamii keessatti waraana gaggeessaa jira kananis ummatni miidhamaa jira jedhan. Waraanni keenyas bakkuma dura ture taa'uun ofirraa ittisaa jira jedhan.
Bulchaan Godina Wallaga Lixaa Obbo Gammachiis Tamasgeen ammoo qaamota lamaan gidduu walitti dhukaasuun jiraachuu danda'a jedhanii haleellaa qilleensarraa jedhamu garuu qulqulleefachuun qaba jedhan.
''Dhimma kana irratti odeeffannoo hin qabu nan qulqulleeffadha'' Obbo Gammachiis.
Haleellaan kun hin gaggeeffamne jechuudhaa gaaffii jedhus '' jiras hin jirus jechuu hin danda'u'' jechuun deebisan.
Garuu waraanni mootummaas bakka bakkatti socho'aa waan jiruuf yeroo dhukaasni yeroo gaggeefamu gidduutti namni miidhamu jiraachuu danda'a shakkii jedhus qabna jedhan.
ABO'n dhimma waraanaa irratti hirmaannaa qaama sadaffaa gaafate
ABO'n waamicha Abbootii Gadaa fi abbootii amantaa guutummaatti fudhanneerra karaa nagaa taheenis mootummaa waliin waliigaluu barbaana jedhe.
ABO'n bifa haaraan waliigaltee keenya hojiitti jijjiiruuf qaamni sadaffaan nu barbaachisa jedheera.
'Rakkoo nageenyaa bara darbe yuunivarsiitileetti mudate hambisuuf hojii gahaan hojjatamu qaba'
Lammiileen Taanzaaniyaa filannoo waliigalaaf sagalee kennuu eegalan
Kormaan hindaaqqoo lolarra ture poolisii ajjeese
Kormaa handaqqoo ollaa jeequun mana murtiitti himatame
Yeroo dhuma kan haaromfame: 5 Fuulbaana 2019
Bishaan Addeessarratti argame dhala namaa achirra jiraachisuuf ooluu danda’a
Lukkuu gurraacha dargaggoota sadi hidhaaf saaxile
Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Hagayya 2018